Weather in Bali tamin'ny Janoary ~ Journey-Assist - Andro fialan-tsasatra any Bali ny volana Janoary
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Toetr'andro sy Bali » Weather in Bali tamin'ny Janoary
Weather in Bali tamin'ny Janoary
Tamin'ny volana Janoary dia nanomboka tao Bali ny tampon'ny fotoanan'ny orana. Voalaza manokana izany amin'ny tapany faharoa amin'ny volana.
Ny mari-pana amin'ny Bali amin'ny volana Janoary dia 32-34 °. Mihena ny mari-pana amin'ny alina manodidina ny 24 °.
Ny hafanan'ny rano any Bali tamin'ny Janoary
Ny rano amin'ny morontsiraka rehetra ao amin'ny nosy dia mafana be ary mahatratra 29 °. Saingy ny fialantsasatra amoron-dranomasina noho ireo mari-pamantarana ny toetr'andro dia tsy azo noheverina ho mahazo aina amin'ny Janoary.
Ity volana ity koa dia mamaritra ny habetsaky ny fako avoakan'ny ranomasina eny amoron-dranomasina.
Nahatratra 85% ny fanetrentena tamin'ny volana Janoary. Manopy mavitrika, zavona matetika. Ny fandehanana any an-tendrombohitra mandritra io vanim-potoana io dia tena mahatsiravina ary hiaraka amin'ny fitsangantsanganana eny anaty rahona.
Varatra any Bali ny volana janoary. Vanim-potoana orana
Ny haavon-dresaky ny rotsakorana amin'ny nosy dia 340mm. Any avaratra dia somary orana kely, satria eo izy ireo no miaro ny tendrombohitra. Ny isan'ny orana dia 15 ka hatramin'ny 27 orana mandritra ny volana.
Surfing ao Bali tamin'ny Janoary
Sarotra ny Surfing amin'ny volana Janoary, tsy mety ny onja ary mampidi-doza mihitsy aza. Raha ny marobe dia mihetsika ihany koa ny fikorianan-dalana.